How'd it happen and more reports?: လက်ရှိ အမိမြေက ခံလိုက်ရတဲ့ စီးပွားရေးအတွေ့အကြုံ
အမိမြေက ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ဘူးသူတိုင်းကြုံတွေ့နေရသော လူကြီးတွေကို ဖာခေါင်းမဖြစ်ရုံသမယ်လုပ်နေ ရတဲ့ ကုမ္မဏီသူဌေးတွေရဲ့ တကယ်အဖြစ်မှန်တွေပါ...မယုံမရှိနှင့် လက်တွေ့ပါ.....
အခုခေတ်စီးပွားရေးသမားတွေက အာဏာရှိလူကြီးတွေကို ငွေပေးရုံနှင့်မပြီးပါဘူး အရက်သောက် ရင်လဲ ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေနှင့်မူးရင် နိုက်ဂလပ်၊ ဂေါက်ဂလပ်သွား မော်ဒယ်ချောချောလေးနှင့် ချိပ်ထားရပြီး စပေါင်ဆာပေးနိုင်မှ တော်ရကျတဲ့ ခေတ်ပါ....ဒီလိုလုပ်ထားနိုင်သူတွေ အောင်မြင်နေတာကို သင်တို့တွေ့လိမ်မယ်..... ဘယ်သူမှခတ် ကင်းကင်းနေလို့မရပါဘူး...
ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ BUS တွေပေါ်မှာ အလိုလျောက် ငွေပေးချေစနစ်သုံး AFC စီမံကိန်း
ကျွန်တော် ကုမ္ပဏီက ဟောင်ကောင် အခြေစိုက် အရှအဆင့် ၁၊ ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃ ရှိတဲ့ ACS smart card Corporation ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ ACS ကုမ္ပဏီရဲ့ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်ရရှိခဲ့တာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာပေါ့။ ACS က လက်ရှိ စင်္ကာပူတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ATM တွေ အားလုံးထဲက smart card ဖတ်စက်တွေကို ရောင်းချပေးနိုင်လောက်တဲ့အထိ အောင်မြင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ထိပ်တန်း ATM ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ NCR တို့ Wincor Nexdof တို့နဲ့လည်း အလွန်ခိုင်မာတဲ့ partner တွေပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံက Ezlink ဆိုတဲ့ BUS ကား MRT station တွေမှာရှိတဲ့ အလိုလျောက်ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်ကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးထားတာပါ။ ACS က ထုတ်တဲ့ Ezlink ကို အသုံးပြု top up လုပ် ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ smart card reader တွေကို Simlim Square မှာ တွေ့နိုင် ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟောင်ကောင်က EZlink ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Octopus ငွေပေးချေစနစ်မှာလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မလေးရှားနိုင်ငံက tap to pay ငွေ ပေးချေစနစ်လည်း ACS က လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။
ဆိုလိုတာက ACS ကုမ္ပဏီရဲ့ smart card ငွေပေးချေစနစ် အတွေ့အကြုံဟာ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်လည်း အများပြည်သူ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခြင်း security နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံခြုံရေး ငွေကြေးစိတ်ချရမှု အပိုင်းတွေမှာလည်း အတွေ့အကြုံပြည့်ဝစွာ ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီ ACS ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တစ်ဦးတည်း partner ကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ transportation စနစ်တွေကို သူတို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ hong kong နဲ့ Singapore တို့လိုမျိုး အဆင့်မြှင့်တင်ပေးချင်တာပါ။
ဒါကြောင့် သူတို့က အဲဒီအချိန်က အစိုးရကို zero investment plan နဲ့ ချင်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ zero investment plan ဆိုတာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူက တစ်ပြားမှ စိုက်ထုတ်စရာ ရင်းနှီးစရာမလိုပဲ ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီနဲ့ ACS corporation တို့က အလုံးစုံ ကုန်ကျခံဆောင်ရွက်မယ့် စီမံကိန်းပါ။ ACS corporation က HSBC bank နဲ့ မိတ်ဖက် partner တွေဖြစ်လို့ finical က အထူးတောင့်တင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ hong kong stock share ဈေးကွက်မှာလည်း တန်းဝင်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင် Forbes magazine ရဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1 billion အောက် အအောင်မြင်ဆုံးသော ကုမ္ပဏီ အခု ၄၀ မှာလည်း ထိပ်ဆုံးမှာ အရွေးခံရအောင် အောင်မြင်မှု ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။
ဒီစီမံကိန်းကို စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် မထသမှာ သွားပြီး presentation ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထသဆိုတာ ယဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးချင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ကြတာမို့ ဒီလို စီမံကိန်းကိုလုပ်ဖို့ အဆင်ပြေမှုတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီက ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို presentation တရားဝင် ဦးပိုင် ရုံးချုပ်မှာလာလုပ်ဖို့ ဖိတ်ကြားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်နဲ့အတူ ACS corporation ရဲ့ chairman နှင့် CEO တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mr. Danny တို့အဖွဲက ပါရမီ ယဉ်လိုင်းမှာ သွားရောက် presentation ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့အပါအဝင် လာပြီး သူတို့ဆီကို presentation လုပ်တာ ၇ ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ အဲဒီ ၇ ဖွဲ့ထဲကမှ ပြန်ရွေးမယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပါ။ ရှိခဲ့တဲ့ portfolio လုပ်ငန်း experiences တွေအားလုံးက အလွန်ကို ကောင်းပါတယ်။ သူများတွေထက်လည်း သာပြီးသားပါ။ ပြီးတော့ ဒီစနစ်ကို ကျွန်တော်တို့ ရောင်းချတာ မဟုတ်ပါ။ အစိုးရအတွက် ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာတစ်ပြားမှ မသုံးပဲ ရင်းနှီးပေးမှာပါ။ ၆ လ တိတိ စမ်းသပ်ကာလ သတ်မှတ်ပြီး ဘာအကျိုးအမြတ်တစ်စုံတရာမှ ရယူခြင်းမရှိပဲ လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်မှ ဆက်လုပ်မှာပါ။ မအောင်မြင်ရင် တစ်ပြားမှ ပြန်မတောင်းပဲ နောက်ဆုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ အဆင့်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းလာလိုက်တာ။ ဒီကြားထဲ နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအမံတွေကို ဦးပိုင်က တာဝန်ရှိသူတွေ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေကို အဆင့်ဆင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်ပါ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ အဲဒီစီမံကိန်းအတွက် မည်သည့် ကော်မရှင် ငွေကြေး တစ်စုံတစ်ရာကိုမှ ဦးပိုင်ကကော ဗန္ဓုလယဉ်လိုင်းက တာဝန်ရှိ MD နှင့်တကွ director တွေကို ပေးခဲ့ခြင်းမရှိသလို သူတို့လည်း တောင်းဆိုခြင်းအလျင်းမရှိပါ။ သူတို့က တကယ်ကို ဒီစနစ်ကို လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၇ ခုထဲမှာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လုပ်ဖြစ်ဖို့ ကျိန်းသေသွားပြီ ဘယ်လို စမယ် ဘယ်လို လုပ်မယ် ဘယ်လို တပ်ဆင်မယ်ပေါ့ အဲဒါတွေကို အသေးစိတ် မေးပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ပျော်ပါတယ်။ မည်သည့် လဒ်လာဘ တစ်စိုးတစ်စဉ်းမှ ပေးစရာမလိုပဲ တရားဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။ မြန်မာပြည်ကို ကျွန်တော်တို့ ACS Corporation ရဲ့ ဥက္ကဌ ထပ်ပြီး ပြန်လာပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ထပ်တွေ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပြင်ပကို ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ့် သတင်းက ပျံ့နှံ့သွားပါပြီ။ MRTV4ကလည်း ကျွန်တော့်ကို လာတွေ့ပြီး ရိုက်ကူးပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်။ အဲဒီခေတ်က နာမည်ကျော် ဂျာနယ်အတော်များများကလည်း ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ပါတယ် အင်တာဗျူးပါတယ်။ အင်တာနက်မှာလည်း အလိုလျောက်ငွေပေးချေစနစ်သုံးတဲ့ AFC ကို မြန်မာပြည်မှာ စသုံးမယ်ဆိုတာ ပါနေပါပြီ။ AFC ရဲ့ အရှည်ခေါက်က automatic fares collection ပါ။ ကျွန်တော်တို့ စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်တာတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဝေဖန်တာတွေကို ကျွန်တော် မကြောက်ပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီး ညာချတာမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ စနစ်က လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာရော ဟောင်ကောင်မှာပါ အောင်မြင်ပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်နေတာတွေ အခြားသော အခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုပါ ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အသင့်ရှိနေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့…. အစိုးရက ၂၀၁၁ မှာ စပြောင်းပါတော့တယ်…
ကျွန်တော်တို့ စနစ်လည်း စတပ်တော့မယ်ပေါ့ hongkong ဆိပ်ကမ်းမှာ ပစ္စည်းတွေအားလုံး ready to export to Myanmar ဖြစ်နေပြီလေ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဗန္ဓုလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အကြောင်းကြားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့က iPay နဲ့ ပဲ လုပ်ကို လုပ်ရမယ်လို့ ပြောပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဟသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဘယ်လိုစနစ်လဲ ipay ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ မေးတော့ ဗန္ဓုလက တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း သူတို့လည်း မသိသေးဘူး ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရက ချမှတ်ပေးတာလို့ ပြန်ဖြေပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လူကြီးဆီ အပြေးအလွှားပြေးပြီး presentation လုပ်ရတော့တာပေါ့။ သူက နားထောင်နေတယ်။ ပြီးတော့မှ မင်းတို့က ငါ့ဆီကို လာမှ မပြောပဲကိုး။ ipay တစ်ခုတည်း ငါ့ကိုလာပြောတော့ ငါက ipay နဲ့ လုပ်တာပေါ့တဲ့။ သူတို့စက်တွေက အမေရိကန်က မှာရမှာတဲ့။ အဲဒီ အဖြေကိုပဲ ကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။
Ipay ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တရားဝင် ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီ ၇ ခုမှာ ပါခဲ့ရင် ကျွန်တော် လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ ဘယ်ကမှ ဘယ်လိုပေါ်လာမှန်းမသိပဲ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကို ဘယ်လိုရှင်းပြပြီး ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တယ်မသိ အခြားသော ကုမ္ပဏီ ၇ ပါ မသိလိုက်ပဲ လုပ်ခွင့်ရသွားတာပါ။ ပြီးတော့ သူတို့နောက်ကြောင်းကို စုံစမ်းတော့ အိုင်တီကုမ္ပဏီမဟုတ်ပဲ သွားတိုက်ဆေးတွေ ကော်ဖီမစ်တွေ ထုတ်ရောင်း စီးပွားရှာပြီး အစိုးရကို အခွန်ရှောင်နေတဲ့ လူမျိုးခြားတွေပိုင် နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်နေပါရောလားဗျာ။ ကျွန်တော့်ပြိုင်ဖက် အခြားသော ကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂိုလ်တောင် ရင်ဖွင့်သွားတယ် ကိုသစ္စာရယ် ခင်ဗျားလည်း အိုင်တီလုပ်တာ ကျွန်တော်လည်း အိုင်တီလုပ်တာ ဘယ်သူရရပြသနာမရှိဘူး အားလုံး အိုင်တီလောကပဲ။ ခုဟာက ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် အိုင်တီလည်း တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူး တင်ဒါလည်းမပြိုင်ပဲ ရသွားတာ ဘယ်လိုလဲဗျာ ဆိုပြီး ငိုချင်းချသွားပါလေရဲ့။ ကျွန်တော်က ပိုကြေကွဲတာပေါ့ဗျာ။ ဒီ ၂၀၀၉ က နေ ၂၀၁၁ အတွင်း ဒီစီမံကိန်းအတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားခဲ့သမျှ ရင်းနှီးခဲ့သမျှ သွားပြီ။ နောက်ပြီး အမေရိကန်က ပစ္စည်းမှာတယ်ဆိုရအောင် iphone လို ပစ္စည်းမျိုး Mac Book လို အမေရိကန် brand laptop တောင် made in china ဆိုတာ ရန်ကုန်တိုင်းက အကြီးအကဲကြီးများ မသိလို့လားဗျာ။
အဲဒီလိုနဲ့ ဘယ်လို ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်လေမသိ။ တစ်ခါမှ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှ ဘာ AFC စနစ် အတွေ့အကြုံမှ မရှိသော နာမည်မရှိ iPay ကြီးက ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကြီးကို ရရှိသွားလေသောအခါ… အခု iPay အောင်မြင်နေလား ပြည်သူတွေသုံးနေလားဆိုတာ… အခုလက်ရှိ အဖြစ်အပျက်တွေက သက်သေပါပဲဗျာ… မြန်မာပြည်မှာ တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်တွေကို စတင်ဖို့ဆိုတာ ခေတ်ဘယ်လောက်ပြောင်းတာကို စောင့်နေရမလဲလို့ မျှော်လင့်ရင်း…နောက်နေ့ကျရင် ဘဏ်စနစ်တွေ ဘဏ်လို ဖြစ်လာတယ် ဘယ်လို online သွားတယ်ဆိုတာ ထပ်ရေးပါဦးမယ်…
ထောက်ထားစရာတွေရှိလို့ အချို့သော အချက်အလက်များ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်များအား ချန်လှပ်ထားရှိပါတယ်…
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်